महानगर वीरगन्जमा कसले मार्ला बाजी ? « Himal Post | Online News Revolution
महानगर वीरगन्जमा कसले मार्ला बाजी ?
प्रकाशित मिति : २०७४, २२ भाद्र ०७:०४
भदौ २२, काठमाडौं-
देशकै प्रमुख आर्थिक नगरी एवं दुई नम्बर प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका वीरगन्जको प्रमुख पद हत्याउन दलहरू लागिपरेका छन् । प्रमुख दलसहित मधेसी दल कसरी महानगरको नेतृत्व गर्न सकिन्छ भन्नेमा शक्ति खर्चिरहेका छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
बुधबार कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, फोरम लोकतान्त्रिक, फोरम नेपाल, राजपासहित स्वतन्त्र गरी दर्जनौं उम्मेदवारले महानगर नेतृत्वका लागि मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
पैसाको अत्यधिक हाबी
भारतसँग समेत सम्बन्ध विस्तार